Midibkaada Waa Quruxdaada! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Muslimo Cabdullaahi — February 28, 2020
Geenyo Afrikaan ah guulihii uuntay midib gaar ah uu u hibeeyey baa tahay. Rabigaa wuxuu kuu qoray seegi maysidee sidaas say haku raadin. San ku neef aan kugu rabin sida Rabi uu ku uumay yuusan ku seegin akhiradaada iyo aduunkaadaba.
Midib kaad qurxoon baad qaradaha adduunka oo idil oga soo cantahay. Taasi tusaale ha kugu filnaato, waa qurux iyo haybad rabi gaar kuu siiyey adi yeysan ku qaadın garaad xumi. Ha rogin midibkaada qaaliga ah gali maankaad guulihii ku uuntay in uu ka cilmi badanyahay. Garaad xumida yeysan ku qaadın dhayman baa tahay dhabti oo ay dhaayuhu ku doogsadaan.
Meel kastoo dunida laga tago midibkaada madowga ah waa mid ku yar.
Cibro qaadasho waxaa kugu filan cidladiihiisa caafimaad cadaankaan aad raadinayso. Ciil yuusan ku galin qolo walba rabi midib qaas ah buu siiyey. Cadaab rabi iyo cudur waxaa kaga fiican midibkaada quruxda badan qaarad baad qaas u tahay. Quur way dari cadaan yeysan ceenkale kaa dhigin iyo waxaan indhahaa u roonayn. Afrikaan dhalad ah baa tahay amaantaada waa midibkaada qaaliga ah qiimo lagu gadan kara uusan jirin.
“Amaan waxaa kugu filan midibkaada qaaska ah oo qaaradaha kale oga duwantahay.”
Xaqiiqdaa ah in aan leenahay mid aad u qurxoon laakiin sababta kaliftay gabdhaheena in ay rogaa midibkooda ayaan la yaabay. Ka dibna in aan baaro sababtaas ayaan go’aansaday waxaa isoo baxday sababo badan oo iga yaabiyey. Inta badan gabdhaha wax ay ku leeyihiin raga wax ay rabaan hablo leh midibka cadaanka ah. Si kastoo ay ahaato in aad u badasho midibkaada qurxoon cid istaahisho ma jirto ayaan aminsanahay. Laakiin waxaan sii baaray arinkaas ah in ay raga rabaan hablaha midibka cadaanka ah leh, waxaa isoo baxday jawaabo iga sii yaabisay.
Waxaan ogaaday in ay jirto is faham dari wayn oo ka dhaxayso dumarka iyo raga. Hablaha si qaldan ayey wax u fahmeen waa sax raga way jecelyihiin dumarka cad walibi ma dhihi karo ragoo idil kaliya waa qayb ka mid ah, waayo qofba quruxda nooc ayuu u yaqanaa. Laakiin raga ma rabaan hablaha iscadeeyey ee waxay rabaan cadaan dabeeci ah ayey igu yiraahdeen, sababtoo ah dumarka iscadeeyo waxaa lagala kulmaa dhibaatooyin badan oo ka mid tahay markasto waxaad u baqaysaa cafimaadka jidhkeeda iyo waxaaba si dheer waxay rabtaa qarash fara badan oo kasii badan inta ay rabaan dumar kale.
Raga ma rabaan hablaha iscadeeyey ee waxay rabaan cadaan dabeeci ah ayey igu yiraahdeen, sababtoo ah dumarka iscadeeyo waxaa lagala kulmaa dhibaatooyin badan oo ka mid tahay markasto waxaad u baqaysaa cafimaadka jidhkeeda iyo waxaaba si dheer waxay rabtaa qarash fara badan oo kasii badan inta ay rabaan dumar kale.
Waxaa jirtay qiso mar dhacday oo aan aniga u ahaa goob joog. Waxaa is guursaday gabar iyo wiil mudo wada socday oo aad isku fahmay. Nasiib daro waxaa dhacday in gabadhii uu wiilka iska furay habeenkooda koowaad ee aqal galka. Dadka su’aal badan ayey is waydiyeen waxa sababy in ay kala tagaan lammanahaan cusub aad isku jeclaa. Laakiin gabadha ayaa ka sheekaysay waxa meesha ka dhacay waxay tiri waxaan galay qalad iyo walibo qiyaano ayaan sameeyey.
“Waxaaan cadeeyey jirkayga qaybo ka mid ah qaybo kalena ma cadaynin, oo in aan wada cadeeyo la ii qaatay.”
Ayada way isla saxantahay laakiin in qayb la caddeeyo iyo in jidhka idil la wada cadeeyo waxa dhan waa wada qalad iyo waliba xaaraan. Mar haddii lees guursado labada qof wax kala qarsoonaanaayo ma jiri doonta, taasi ayaa sababtay in arinka uu kashifmo. Ayada Waxay ku candocoonaysaa in uu yahay qaladkeeda in aysan jirkeeda oo idil wada caday. Oo taas ayaa sababtay in uu guurkayga burburo oo aan waayo qofkaan jeclaa ayey tiri.
Taasi way dhacdaa oo waxaa jira hablo jirkooda qaar ka mid ah waliba inta muuqato jidhka cadeeyo inta kalena ka tago. Oo waxaa ka dhaadhacsan saan raga ku soo jiido inta cad ee jirkaad, lakiin maalin ayaa ceeb soo bixi doonta oo wax aaan laka qarsonaan dooni.
Laakiin wiilka furay gabdha markii la waydiyey fikirkiisa saas waa ka duwanaa oo wuxuu yiri way i qiyaantay aniga midib qaas ah kuma soo xulan oo dad nimadeed ayan ku soo xushay. Qiyaano ay i qiyaantay darteeda ayey u istaahilin in ay xaas kayga sii ahaato, waayo waa qof jidhkeeda bedeshay rabigeedna dambi ka gashay anigana i qiyaantay.
Xaqiiqdaa ah in aysan ragga intooda badan midibka cadaanka ah raadinin. Laakiin waa dhibaato ah haddii in aad bedesho midibkaada rag ku raadi is laheed, laakiin taas rag la’aan ku sababto, oo wax ku guursado aad wayso ama taas darteeda laguu soo furo. Waa dhibaato waxaad wax ku radi islaheed haddii aad wax ku waysay.
Qiso kale oo qosol badan ayaa qof iiga sheekeeyey maalin ayaa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho gabar gaari bajaaj ku jeeray. Wadihii gaari bajaajka lahaa wuu cararay inkastoo gawadha dhib wayn uusan soo gaarsiin, waxaa soo qabtay ciidanka dowlada Soomaaliya.
Wuxuu ahaa wiil dhalinyara ah wuxuu yiri maxaad isoo qawateen oo aad waqti iiga lumiseen idinkana waqti isaga lumiseen, waayo xitaa haddii aan gawadhaan u wado isbitaal daawo looma soo heli doono sababtoo ah way iscadaysay oo maqaarkeeda ma daawaysmaayo.
Dadka intoo badan qofka is cadeeyo hore ayey ka gartaan taasi oo sababta in ay rago intoo badan marka ay arkaan gawar in ay dhahaa “qoftaan dabeeci miyaa am maqaar bedel” taasi oo micnaheeda ah ma mid iscadaysaa. Waa wax leh dhibaatooyin aad u fara badan oo aan mid mid ogo hadli doono maqaalo kale oo kala duwan kani waa hordhaca dhibaatad midabkoo la rogo.
Tags: Midibkaada Waa Quruxdaada
Next post Qalliinkii Madaxyada La Isku Beddelaayo - Ma suurto geli karaa ayay kula tahay?
Previous post Muxuu Yahay Borotiinka Budada Ah 'whey protein?